Izinsizakalo Zomshuwalense Ukuthengisa Nokuqasha ePhilippines
PH zu Ngena ngemvume
Ishicilelwe ngu vigattin
ukubuka Izinsizakalo Zomshuwalense eshicilelwe 3 years ago
Khetha isigabaResidential homes Houses Apartments Rooms Condos Townhouses UnitsLand lots Residential Land Agricultural LandCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Pest Control Insurance ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Brokers
Umshuwalense uyindlela yokuvikelwa ekulahlekelweni yimali. Kuyindlela yokulawulwa kwengozi esetshenziselwa ukuhlanganisa ubungozi bokulahleka okuphikisayo, okungaqinisekile. Ibhizinisi elihlinzeka ngomshuwalense laziwa njengomhlinzeki womshuwalense, inkampani yomshuwalense, noma yenethiwekhi yomshuwalense. Umuntu noma ibhizinisi elithenga umshwalense laziwa njengomvikeli noma onenqubomgomo. Ukuthengiselana komshuwalense kufaka phakathi ukuthola umshuwalense uthatha ukulahleka okuqinisekisiwe nokwaziwa okuncane ngendlela yokukhokha kumshuwalense ukuze athembise isithembiso somshuwalense sokunxephezela umshuwalense uma kwenzeka elahlekelwe. Ukulahleka kungenzeka noma kungabi ngokwezezimali, kepha kufanele kuncishiswe kumigomo yezezimali, futhi kufanele kufake phakathi okuthile lapho insured inenzalo engalapheki esekwe ubunikazi, ubunikazi, noma ubudlelwane bepreexisting. Umshuwalense uthola inkontileka, ebizwa ngokuthi inqubomgomo yomshuwalense, echaza imibandela nezimo lapho umhlinzeki womshuwalense uzonxeshezelwa ngokwezezimali. Inani lemali elikhokhwa ngumshuwalense kumshwalense ukuthola imali ebekelwe inqubomgomo yomshuwalense ibizwa ngokuthi yi-premium. Uma umshuwalense uthola ukulahleka okungase kumbozwe inqubomgomo yomshuwalense, umshuwalense uhambisa isimangalo kumhlinzeki womshuwalense ukuze sicutshungulwe yisiphikiso sezimangalo.